Wararka - Su Zimeng: Mashiinnada dhismaha ayaa ka beddelaya kororka suuqa u janjeedha una beddelaya cusbooneysiinta suuqyada saamiyada iyo casriyaynta suuqa ee kordhay
Su Zimeng, oo madax ka ah Ururka Warshadaha Mashiinka Dhismaha ee Shiinaha, ayaa ka sheegay "Shirka Tobnaad Qalabka iyo Shirka Maareynta Qalabka" in qoditaanadu yihiin barometer ka mid ah warshadaha mashiinada dhismaha. Noocyada guryaha ka shaqeeya ayaa ka badan 70% suuqa qodda hadda. Noocyo badan oo gudaha ah ayaa la qalabeyn doonaa, sumadaha gudahana waxay yeelan doonaan guulo badan oo ku saabsan kalsoonida, adkeysiga, iyo yareynta tamarta iyo yareynta qiiqa.
Sida laga soo xigtay Su Zimeng, iibinta mashiinada dhismaha iyo qalabka kaladuwan ee dhismaha sanadkan waxay gaareen meeshii ugu sareysay sanadihii ugu dambeeyay. Qiyaasta iibka wiishashka xamuulka ayaa gaadhay 45,000 oo cutub, halka iibka wiishashka wiishashka uu gaadhay 2,520 unug, baahida loo qabo wiishka wiishka ayaa yaraaday tan iyo sanadkan. Meelaha wax lagu qaado iyo aaladaha shaqada hawada sare ayaa si xowli ah u horumaray sannadihii la soo dhaafay, waxaana la filayaa in alaabooyinkan ay heli doonaan qol ballaaran oo horumarineed 5-ta sano ee soo socota.
Tirakoob dhameystiran oo laga sameeyay kooxaha shirkadaha in xiriirada muhiimka ah ee ururku muujinayaan in dakhliga iibka ee sanadka 2019 uu kordhay 20% marka loo barbardhigo 2018, macaashkuna uu kordhay 71.3%. Su Zimeng ayaa yiri. Xogta dhammeystiran ee tirakoobka shirkadaha muhiimka ah waxay muujineysaa in aasaaska 2019 Sanadka 2020, dakhliga iibka ee warshadaha mashiinada dhismaha uu kordhay 23.7%, faa iidaduna ay kordhay 36%.
Marka laga eego aragtida tiknoolajiyada wax soo saarka, shirkado badan oo ka tirsan Bauma sannadkan waxay soo bandhigeen alaabooyin teknolojiyad cusub ah, dufcad ka mid ah wax soo saarka caqliga leh ee hawlgallada kaabayaasha ah, darawal aan cidna wadin, maaraynta kutlada, ilaalinta amniga, hawlgallada gaarka ah, kontoroolka fog, cilad bixinta, maaraynta wareegga nolosha, iwm. Badeecada si ficil ahaan ah ayaa loo adeegsaday, si dabacsan ayaa loo xaliyay dhibaatooyinka qaar ka mid ah dhismaha, waxay la kulantay baahiyaha qalabka dhismaha injineernimada waaweyn, waxayna dhasheen qeyb ka mid ah mashiinada injineernimada dhamaadka-sare iyo qalabka farsamada waaweyn. Su Zimeng wuxuu sheegay in loo baahan yahay in la hagaajiyo heerka digitalization, cagaarka, iyo noocyada dhameystiran ee alaabada qaar. Qaar ka mid ah qalabka baaxadda weyn iyo qaybaha muhiimka ah iyo qaybaha waxay leeyihiin tartan suuqnimo oo aan ku filnayn, laakiin "14-ka Shanta Sano ee Qorshaha" kadib, alaabooyin badan ayaa gaari doona heerka hoggaaminta caalamiga ah. .
Marka la qiimeeyo horumarinta mashiinada dhismaha marka laga eego aragtida qaabdhismeedka, Su Zimeng waxay aaminsan tahay in marka hore, mashiinada dhismaha ay ka wareegayaan suuqa kororka una wareejinayaan cusbooneysiinta suuqa saamiyada iyo casriyaynta kororka suuqa; tan labaad, laga bilaabo raacdada kharash-ku-oolnimada illaa tayo sare iyo waxqabad sare; Qaab dhismeedka baahida guud ee qalabka guud ahaan waxaa ka mid ah dijitaal, caqli, cagaar, raaxo, jaangooyooyin dhameystiran, kooxo shaqo, xalal dhameystiran, iyo qaabab dalab oo kala duwan. Su Zimeng waxay tiri iyadoo la adeegsanayo qaan gaar ah ee qalabka iyo teknoolojiyada, bay'adaha cusub ee dhismaha oo ay ka mid yihiin plateaus, qabow daran iyo deegaanno kale waxay soo bandhigeen shuruudo cusub oo ku saabsan qalabka, waxay sare u qaadeen hagaajinta teknolojiyadda dhismaha, waxayna sidoo kale dhasheen baahida loo qabo qalabka soo baxaya. . Isbeddelkani Waa mid aad iyo aad u muuqda, oo ay ku jiraan qaybta dhismaha aasaasiga ah, weli waxaa jira koboc weyn.
Laga soo bilaabo 2020, dalabka suuqa mashiinada dhismaha ee guryaha ayaa si weyn kor ugu kacay, iyo qiimaha dhoofinta suuqyada caalamiga ah waxay muujisay hoos u dhac. Su Zimeng ayaa tiri: “Waxaa lafilayaa in sanadka 2021, dalabka cusub iyo baahida bedelka suuqa makiinadaha dhismaha ay door wada qaadan doonaan. Iyada oo ay weheliyaan ururinta siyaasadaha qaran, warshadaha mashiinada dhismaha ayaa si joogto ah u kori doona. ”